डुंगुरमाथिकाे राजनीति कहिलेसम्म ?
बुधबार, जेठ ४ २०७९ ०३:४१ AM
बुधबार २८ बैशाख २०७९ ०१:०७ PM
काठमाडाैँ - पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरमाथि राजनीति भइरहेको छ । महिनाैँदेखि राजधानीको फोहोर उठ्न सकेकाे छैन, तर त्यसैलाई कुल्चीमिल्ची भोट माग्न जुलुसका साथ हिड्ने नेताहरु प्रशस्तै देखिन्छन् । अहिले पनि मुख्य सडक किनारा, पुल आसपास र चोक चोकमा फोहोरको डंगुर देख्न सकिन्छ । फोहोरले काठमाडौंको सुन्दरतामा नै असर पुर्याएको छ । काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने कुनै जमानामा सुन्दर कान्तिपुरी नगरी भनेर चिह्निएको सहर हाल आएर एउटा अव्यवस्थित तथा दुर्गन्धित र कुरूप सहरको रूपमा परिणत हुन गइरहेको छ । जताततै थुप्रिएको फोहोरको डङ्गुर, नाली तथा ढल फुटेको अवस्था, खाल्टाखुल्टी भएका सड्क, अव्यवस्थित यतायात प्रणाली आदि समस्याहरूबाट काठमाडौंवासीहरू आजित छन् । यी समस्या काठमाडौँका मात्र नभई, सम्पूर्ण नेपालका सहरहरूका साझा समस्याहरू हुन् ।
यस्तै, स्थानीय सरकारको निर्वाचनको मिति बैशाख ३० लाग्दै गर्दा राजनीतिक माहौल तात्नु र नेता–कार्यकर्ता सडकमा निस्कनु स्वाभाविकै हो । एकले अर्को प्रत्याशीलाई तुच्छ शब्दमा गाली गर्ने श्रृंखलाले निरन्तरता पाउनु भने स्वाभाविक थिएन । हरेक निर्वाचनमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर राजनीतिक दलहरू काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषय घोषणपत्रमा देखाएर मत आफ्नो पक्षमा पार्न व्यस्त छन् ।
आमनागरिकहरुले पनि हिजो जे भनिएको थियो त्यो किन भएन भनेर आवाज उठाउन सकेका छैनन् बरु मत माग्न आउनेलाई मन खाेलेर स्वागत गरिरहेका देखिन्छन् । जनतामा चेतना भएपनि उनीहरुले नेता र उम्मेदवारलाई हिजो गरिएको बाचा किन पूरा भएन भनेर प्रश्न गर्न नसक्नुले नेताहरुलाई झन् अराजक बनाउन मलजल गरिरहेको देखिन्छ । जनतामा अझै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई हप्काउनसक्ने हिम्मत नहुनु मुलुककैलागि दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ । जनतालाई भ्रममा पार्न सुन्दर सपना बाड्नसक्ने नेताले राजधानी उपत्यकामा फैलिएको दुर्गन्ध भने देखेका छैनन् ।
वर्षायाम शुरु भएसँंगै राजधानीका चोक चोकमा थुप्रिएको फोहोरले निर्वाचन प्रचारमा हिडेका नेता तथा कार्यकर्तालाई गिज्याएपनि उनीहरुका लागि त्यो चुनावी मुद्दा बनेको देखिंदैन । सरकार सञ्चालन गर्नेहरु चिर निन्द्रामा रहेका छन् भने स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु कुम्भकर्णजस्तै निन्द्रामा छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सवारी साधनको संख्या थपेर हुन्छ या दिनरात ओसारेर हुन्छ फोहोरलाई जतिसक्दो चाँडो उठाउनु पर्छ ।कोरोना भाइरसले मुलुक आक्रान्त भइ भर्खर भर्खर तंग्रिएकाे अवस्थामा समयमा फोहोरका कारण अर्को कुनै संक्रामक रोग नफैलिएला भन्न सकिदैन ।
अन्तराष्ट्रिय समुदायले यही फोहोरको सदुपयोग गरेर आम्दानीको स्रोतहरु बढाइरहेका छन् । हाम्रोमा भने यसको सदुपयोग त परे जाओस् कुनै निश्चित स्थानमा लगेर थुपार्न पनि समस्या भएको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा फोहोर थुप्रिएको निकै भइसक्यो तर यसको व्यवस्थापनका लागि चाहिने दीर्घकालीन तथा तत्कालीन दुबै योजना बनाउन महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरु कमजोर साबित भईसकेका छन् । सबै सहरवासीहरू स्वच्छ, हराभरा, वातावरणीय तवरले सन्तुलित, खुल्ला क्षेत्र तथा पार्क, सबै कुनामा पुग्न सक्ने भरपर्दो यातायात व्यवस्था, आर्थिक तथा सामाजिक तवरले जीवनस्तर बृद्धि गर्ने सम्भावना भएको सहरको चाहना राख्दछन् ।
यस्तैमा, मुलुकलाई हाइटेक प्रविधिमा लैजाने घोषणा गर्नसमेत भ्याएका दलहरुले व्यवस्थित राजधानी बनाउनका लागि कुनै योजना अघि सार्न सकेका छैनन् । राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन हुँदैआएको बन्चरेडाँंडाका स्थानीयले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्नसमेत सरकारलाई फुर्सत नहुँदा आज राजधानीवासी दुर्गन्धित शहरमा बस्न बाध्यभएका छन् । वर्षासँंगै फैलने दुर्गन्धले पार्ने असरका बारेमा समेत सरकार अझै सचेत हुन नसक्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुंँदैगएको छ ।
सम्भव नै नहुने उडन्ते कुरा गर्नुभन्दा दलका नेता तथा कार्यकर्ताले कुरुप र फेहोर बन्दै गएको राजधानीलाई सुन्दर बनाउने र दूरदराजमा देखिएका साना–साना समस्यालाई समाधान गर्ने वाचा गरिदिए मात्रै जनता खुसी हुनेथिए कि ! -रूपक शाक्य